ỊTỌ WINDO SSD MAKA WINDOWS 7 - SSD - 2019
Anyị na-ahazi SSD maka ọrụ na Windows 7
Taa, ihe ọ bụla smartphone na gam akporo bụ ngwaọrụ zuru ụwa ọnụ, na-ahapụ gị ka ị rụọ ọtụtụ omume ma zọpụta ozi dị iche iche. Ndị dị otú ahụ gụnyere nchekwa nke kaadị ego na-eji ngwa pụrụ iche. Nke kachasị mma n'ime ha, anyị na-atụle n'isiokwu a.
Ngwa maka ichekwa ego kaadị na android
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịchọta ọtụtụ ngwa e mere kpọmkwem maka ịchekwa kaadị akwụmụgwọ site na Ụlọ Ahịa Google maka n'efu. Anyị ga-ahụ naanị ngwanrọ kachasị mma nke ụdị a. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị a na-esote ọtụtụ n'efu ma dabara maka ma Android ma iOS.
Gụọ kwa: Ngwa maka ichekwa ego kaadị na iPhone
Njikọ ego United United nwere interface dị ọcha na arụmọrụ dị elu iji mee ka ọtụtụ n'ime ihe ndị metụtara metụtara ịzụta na nchekwa nke kaadị ego. Na ya, ị nwere ike iji map ndị echekwara n'oge ọ bụla. Ọzọkwa, ngwa ahụ nwere ogo dị oke nchedo nke data onwe onye.
Na ntinye nke itinye map ndị ọzọ e nwere ederede na-akwalite ọrụ ahụ na ngwa ahụ. Ịnwere ike ịgbakwunye snapshots map ma tinye aka na nọmba barcode. Enwere ike tinye mgbakwunye nọmba ntinye site na iji nyocha ahụ.
Download United ego maka n'efu na Ụlọ Ahịa Google
Ngwa a dị ntakịrị karịa ọrụ gara aga. Karịsịa, ebe ị nwere ike ọ bụghị naanị ịgbakwunye kaadị ego maka nchekwa, kamakwa ịmepụta ndị dị ugbu a site na nnukwu ụlọ ahịa. Ọzọkwa, site na iji ngwa ahụ, a ga-akwụ ụgwọ cashback maka ịzụta, nke ga-emesị bụrụ nke e debere na akaụntụ ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na obere akpa ego.
Usoro nke ịgbakwunye map ọhụrụ na-adaba n'ọtụtụ nzọụkwụ dị mfe ma dị site na ngwa nke mbụ ma ọ bụ site na isi menu.
Download nbudata maka free na Ụlọ Ahịa Google
Ngwa PINbonus na gam akporo nwere interface dị mfe, ma nke a anaghị egbochi ya inye ọtụtụ ọrụ bara uru maka ịgbakwunye, ịchịkwa, na iji kaadị ego.
Window maka ịgbakwunye kaadị ọhụrụ na nke a na-enye gị ohere ịhọrọ site na blanks dabere na ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-ewu ewu, ma ọ bụ mee ya n'onwe gị.
Download PINbonus n'efu na Ụlọ Ahịa Google
Na ngwa a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịgbakwunye ma chekwaa kaadị, kama na-ekere òkè n'ọkwá na-aga n'ihu, nke edepụtara na ibe dị iche, ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Usoro maka ịgbakwunye map ọhụrụ adịghị iche na mbipute gara aga, na-enye ha ohere iji aka tinye data ma họrọ otu n'ime blanks.
Weghachite kalịnda maka n'efu na Ụlọ Ahịa Google
Ụdị ngwa a bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na Russian Federation, na-enye ọrụ niile dị mkpa iji chekwaa ma gbakwunye kaadị ego. Enwere uru dị ukwuu bụ onyinye dị ukwuu nke ụlọ ahịa, na-enye gị ohere iji ọtụtụ ego.
N'adịghị ka ọtụtụ analogs, ọ dị oke mkpa ka edebanye aha iji nweta ọrụ nke ngwa, nke, Otú ọ dị, dị ọbụna na enweghị kaadị ego. Mgbe ị na-eji "obere akpa" ahụ achọpụtaghị ihe ndị na-adịghị mma.
Wepu obere akpa maka Google Play Market
Ngwa ngwa iDiscount dị iche na nke a na-atụle naanị site na ọnụnọ ọrụ ndị ọzọ iji gbakwunye kaadị azụmahịa. Ma ọ bụghị ya, enwere ohere dị mfe maka ịmepụta eserese na iji ha, nyocha nke QR na ngalaba na Kupọns. Ntughachi ihe dị ịrịba ama dị ịrịba ama na-adaba na enweghị ego na nkwalite site n'aka ndị mmekọ.
Download iDiscount maka n'efu na Ụlọ Ahịa Google Play
Ngwa ọzọ dị mfe iji chekwaa kaadị ego. N'ebe a, e nwere gallery na map ndị ọzọ na ngwá ọrụ dị mfe maka ịmepụta ndị ọhụrụ dabere na ndepụta ndị mmekọ. N'otu oge ahụ, ngwa ahụ nwere nchebe dị elu, nke na-enye ohere ịchekwa bonuses site na enyemaka nke koodu nzuzo.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ngwa ahụ nwere nhazi site na mba maka mma. Ọ bụrụ na ị kpee ikpe n'ozuzu, mgbe ahụ Mobile-n'akpa zuru oke na-arụ ọrụ ọrụ ahụ.
Ibudata akpa n'akpa uwe maka n'efu site na Google Play Market
Ihe ọ bụla e weere na ngwa dị mma maka ịchekwa kaadị akwụ ụgwọ. Esemokwu dị n'etiti ha, dịka iwu, na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ndị mmekọ, inwe nkwalite na ego, na ihe ndị ọzọ dị egwu. Ụzọ kachasị mfe iji mee ihe atụ bụ nbudata na ịnwale ụfọdụ n'ime ngwa ndị ahụ.